Trusty Package & Get Dicount, Coupon Points ｜ News TRUSTY E-Commerce
Trusty Package & Get Dicount, Coupon Points...
Trusty Package & Get Dicount, Coupon Points
Trusty Family မှ Corona Virus (Covid-19) ကပ်ရောဂါ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း Trusty E-Commerce ၏ Customer များအတွက် အခြေခံ စားသောက်ကုန်များကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Trusty Member များအတွက် Credit စနစ်ဖြင့် သက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်းရှိနေပါသည်။
Package အမျိုးအစားများမှာ ၆ မျိုး ရှိပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ Package များကို order တင်ပြီးဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် စနေနေ့များတွင် order များလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည့်ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပို့ရမည့် order များအတွက် အင်္ဂါနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီနောက်ဆုံးထား order တင်ပေးရန်နှင့် စနေနေ့ပို့ရမည့် order များအတွက် သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ order တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Trusty Member များအနေဖြင့်ရှိနိုင်မည့် အထူးအခွင့်အရေးများ
– Discount ခံစားခွင့် ၂ဝဝဝကျပ်
– Trusty Coupon ၁ဝဝဝကျပ် အသုံးပြုခွင့်နှင့်
– Trusty Points များလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Trusty New Member များအနေဖြင့်လည်း အကြွေးစနစ်ဖြင့် သက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများကို ဖုန်းနံပါတ် 09-760-888-988 နှင့် 09-401-589-882 သို့ ဆက်သွယ်၍ Package များကိုမှာယူနိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ Trusty New Member ဖြစ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ
3.	ဖုန်းနံပါတ် တို့ကိုပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
TrustyShops တွင် ဈေးဝယ်နိူင်ရန် အောက်ပါလင့်တွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိူင်ပါသည်။
Trusty Package A (အမျိုးအစား A) – ၁၉၀၀၀ ကျပ်
၁။ ဆန် (၃) ပြည် (ပေါ်ဆန်းမွှေး)
၂။ နေကြာဆီ(၅ဝသား) ၁ဘူး၊
၃။ ကြက်သွန်နီ (၁) ထုပ်၊
၄။ ကြက် ဥ (၁၀) လုံး၊
၅။ ငါးသေတ္တာ (၅) ဘူး၊
၆။ ဆား (၁) ထုပ်
၇။ ကော်ဖီ (၅) ထုပ်၊
၈။ ကွေကာ (၅) ထုပ်၊
၉။ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၅ထုပ်
၁၀။ ကုလားပဲ (၁) ထုပ်။
Package B (အမျိုးအစား B) – ၁၅၀၀၀ ကျပ်
၅။ ဆား (၁) ထုပ်
၆။ ကော်ဖီ (၅) ထုပ်၊
၇။ ကွေကာ (၅) ထုပ်၊
၈။ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၅ထုပ်။
Package C (အမျိုးအစား C) – ၁၂၀၀၀ ကျပ်
Trusty Package D (အမျိုးအစား D) – ၁၆၀၀၀ ကျပ်
၁။ ဆန် (၆) ပြည် (ဧည့်မထ အသွယ်)
၃။ ကြက်သွန်နီ ၁ပိသာ၊
၅။ ငါးသေတ္တာ (၅)ဘူး၊
၆။ ငရုတ်သီး မှုန့် (သို့မဟုတ်) အလားတူ ပစ္စည်းတစ်မျိုး
၇။ ကော်ဖီ + ကွေကာ (၅ထုပ်တွဲစီ)၊
၈။ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၅ထုပ်
Package E (အမျိုးအစား E) – ၁၂၀၀၀ ကျပ်
၅။ ငရုတ်သီး မှုန့် (သို့မဟုတ်) အလားတူ ပစ္စည်းတစ်မျိုး
၆။ ကော်ဖီ + ကွေကာ
Package F (အမျိုးအစား F) – ၁၀၀၀၀ ကျပ်
၁။ ဆန် (၆) ပြည် (ဧည့်မထ အသွယ်)၊
၃။ ကြက်သွန် ၁ပိသာ၊
၄။ ငရုတ်သီး မှုန့် (သို့မဟုတ်) အလားတူ ပစ္စည်းတစ်မျိုး
Trusty Family မှ Corona Virus (Covid-19) ကပျရောဂါ အရေးပျေါအခွအေနဖွေဈပျေါနစေဉျအတှငျး Trusty E-Commerce ၏ Customer မြားအတှကျ အခွခေံ စားသောကျကုနျမြားကို စြေးနှုနျးသကျသာစှာဖွငျ့ အလှယျတကူဝယျယူနိုငျပွီး အိမျတိုငျရာရောကျပို့ဆောငျပေးမညျဖွဈပါကွောငျး သတငျးကောငျးပါးအပျပါသညျ။
Trusty Member မြားအတှကျ Credit စနဈဖွငျ့ သကျသာစှာဝယျယူနိုငျမညျ့ အခှငျ့အရေးမြားလညျးရှိနပေါသညျ။
Package အမြိုးအစားမြားမှာ ၆ မြိုး ရှိပွီး မိမိနှဈသကျရာ Package မြားကို order တငျပွီးဆကျသှယျမှာယူနိုငျပါသညျ။ အပတျစဉျ ဗုဒ်ဓဟူးနှငျ့ စနနေမြေ့ားတှငျ order မြားလိုကျလံပို့ဆောငျပေးမညျ့ဖွဈပွီး ဗုဒ်ဓဟူးနပေို့ရမညျ့ order မြားအတှကျ အင်ျဂါနေ့ နလေ့ညျ ၂ နာရီနောကျဆုံးထား order တငျပေးရနျနှငျ့ စနနေပေို့ရမညျ့ order မြားအတှကျ သောကွာနေ့ နလေ့ညျ ၂ နာရီနောကျဆုံးထား၍ order တငျပေးရနျလိုအပျပါသညျ။
Trusty Member မြားအနဖွေငျ့ရှိနိုငျမညျ့ အထူးအခှငျ့အရေးမြား
– Discount ခံစားခှငျ့ ၂ဝဝဝကပျြ
– Trusty Coupon ၁ဝဝဝကပျြ အသုံးပွုခှငျ့နှငျ့
– Trusty Points မြားလညျးအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
Trusty New Member မြားအနဖွေငျ့လညျး အကွှေးစနဈဖွငျ့ သကျသာစှာဝယျယူနိုငျမညျ့အခှငျ့အရေးမြားကို ဖုနျးနံပါတျ 09-760-888-988 နှငျ့ 09-401-589-882 သို့ ဆကျသှယျ၍ Package မြားကိုမှာယူနိုငျပါပွီ။
မှတျခကျြ။ ။ Trusty New Member ဖွဈရနျအတှကျ လိုအပျသညျ့အခကျြအလကျမြား
3.	ဖုနျးနံပါတျ တို့ကိုပွညျ့စုံမှနျကနျစှာ ဖွညျ့စှကျရနျလိုအပျပါသညျ။
TrustyShops တှငျ ဈေးဝယျနိူငျရနျ အောကျပါလငျ့တှငျ ၀ငျရောကျ ကွညျ့ရှုနိူငျပါသညျ။
Trusty Package A (အမြိုးအစား A) – ၁၉၀၀၀ ကပျြ
၁။ ဆနျ (၃) ပွညျ (ပျေါဆနျးမှေး)
၂။ နကွောဆီ(၅ဝသား) ၁ဘူး၊
၃။ ကွကျသှနျနီ (၁) ထုပျ၊
၄။ ကွကျ ဥ (၁၀) လုံး၊
၅။ ငါးသတ်ေတာ (၅) ဘူး၊
၆။ ဆား (၁) ထုပျ
၇။ ကျောဖီ (၅) ထုပျ၊
၈။ ကှကော (၅) ထုပျ၊
၉။ ခေါကျဆှဲခွောကျ ၅ထုပျ
၁၀။ ကုလားပဲ (၁) ထုပျ။
Package B (အမြိုးအစား B) – ၁၅၀၀၀ ကပျြ
၅။ ဆား (၁) ထုပျ
၆။ ကျောဖီ (၅) ထုပျ၊
၇။ ကှကော (၅) ထုပျ၊
၈။ ခေါကျဆှဲခွောကျ ၅ထုပျ။
Package C (အမြိုးအစား C) – ၁၂၀၀၀ ကပျြ
Trusty Package D (အမြိုးအစား D) – ၁၆၀၀၀ ကပျြ
၁။ ဆနျ (၆) ပွညျ (ဧညျ့မထ အသှယျ)
၃။ ကွကျသှနျနီ ၁ပိသာ၊
၅။ ငါးသတ်ေတာ (၅)ဘူး၊
၆။ ငရုတျသီး မှုနျ့ (သို့မဟုတျ) အလားတူ ပစ်စညျးတဈမြိုး
၇။ ကျောဖီ + ကှကော (၅ထုပျတှဲစီ)၊
၈။ ခေါကျဆှဲခွောကျ ၅ထုပျ
Package E (အမြိုးအစား E) – ၁၂၀၀၀ ကပျြ
၅။ ငရုတျသီး မှုနျ့ (သို့မဟုတျ) အလားတူ ပစ်စညျးတဈမြိုး
၆။ ကျောဖီ + ကှကော
Package F (အမြိုးအစား F) – ၁၀၀၀၀ ကပျြ
၁။ ဆနျ (၆) ပွညျ (ဧညျ့မထ အသှယျ)၊
၃။ ကွကျသှနျ ၁ပိသာ၊
၄။ ငရုတျသီး မှုနျ့ (သို့မဟုတျ) အလားတူ ပစ်စညျးတဈမြိုး